"Waxaan Ballanqaadayaa In Karim Benzema Aan Dib Ugu Soo Celiyo Xulka France" | Laacibnet.net
“Waxaan Ballanqaadayaa In Karim Benzema Aan Dib Ugu Soo Celiyo Xulka France”
Karim Benzema ayaa dib ugu laaban doona xulka qaranka France haddii uu Michel Moulin ku guuleysto madaxtinimada xidhiidhka kubadda cagta France.
Michel Moulin oo u tartamaya inuu beddelo Noel Le Great ayaa waxa uu ballan-qaaday inuu Karim Benzema ugu dib uguu soo celin doono xulka qaranka xataa iyadoo ay jirto fadeexadda kiiska loo haysto.
Moulin ayaa ka mid ah tiro murashaxiin ah oo la tartamaya madaxweynaha hadda ee Noel Le Graet oo dagaal adag la galay Benzema, isla markaana ku dhaartay in aanu waligii dib dambe ugu soo laabanaynin qaranka, halka uu qayb ka ahaa olole ay dadka qaarkood dabada ka riixayeen oo ahaa in lagala laabto dhalashada waddanka Faransiiska, iyadoo loo nisbaynayo in waalidkii ay ka yimaaddeen Algeria oo ay asal ahaan kasoo jeedaan.
Karim Benzema ayay ugu dambaysay inuu u ciyaaro xulka qarankiisa France markii ay taariikhdu ahayd November 2015kii, waxaanu seegay tartamadii muhiimka ahaa ee Euro 2016 iyo Koobkii Adduunka 2018 ee ay ku guuleysteen.
Ka hor intii aan laga joojinin u ciyaarista xulka qaranka France, Benzema waxa uu u saftay 81 ciyaarood, waxaase galaafatay kiiska cajalad galmo ahayd oo laga duubay Valbuena shan sannadood ka hor.
Toddobaadkii hore ayaa la shaaciyey in Benzema lasoo taagi doono maxkamadda oo la dhegaysan doono dacwadda, iyadoo haddii lagu helo dembi na ay suurtogal tahay inuu mutaysto xadhig.
Sidaas oo ay tahay, Michel Moulin ayaa ololihiisa ku galay inuu Benzema dib usoo celinayo, waxaanu yidhi: ‘Mid ka mid ah maamuleyaasha Karim Benzema oo ah weeraryahan wanaagsan, waa Didier Deschamps oo shaqaale u ah xidhiidhka kubadda cagta France. Haddii laga sarreeyo, waxa loo sheegayaa inuu ciyaarsiiyo Benzema, waanu ku qasban yahay inuu ciyaarsiiyo.”
Asc. waxan jeclaa enan wacdiga Soo degisto haday macquultahay
Asc Bahda Laacib, fadlan iska saxa halka aad ku qorteen EURO 2016 in France qaaday, oo waxaa qaaday Portugal isla iyaga ayayna ka qaadeen.
Fadlan wararkiina isku daya inaad u yeesheen qof markale dib u Tafaf-tira.